राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा चार नयाँ अनुहार, गर्लान् शानदार प्रदर्शन ? - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा चार नयाँ अनुहार, गर्लान् शानदार प्रदर्शन ?
काठमाडौं, पुष १६ । नेपाल र यूएईबीच यसै महिनाको अन्त्यमा हुन लागेको एकदिवसीय र टी-२० अन्तरदेशीय क्रिकेट शृङ्खलाका निम्ति सोमवार गरिएको प्रारम्भिक छनोटमा चार नयाँ खेलाडीले स्थान पाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीका प्रतिनिधि इमिनुल इस्लाम, मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काले छानेको २० सदस्यीय टोलीमा अविनाश बोहरा, भीम सार्की, सन्दीप जोरा र पवन सर्राफको नाम समेटिएको हो।
युवा खेलाडीहरूमा बोहरा तीव्र गतिका बलर हुन्। त्यस्तै जोरा र सार्की ब्याट्सम्यान तथा सर्राफ अलराउन्डर हुन्। भर्खरै कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न २० ओभरको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) मा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेपछि यी खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा परेको बताइएको छ।
याे पनि पढ्नुस नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई जनही पाँच लाख
बन्द प्रशिक्षण अर्को हप्ता ज्यानुअरी ८ तारिखबाट शुरु हुनेछ। राष्ट्रिय टोलीको अन्तिम १४ सदस्यीय टोलीको घोषणा ज्यानुअरीको दोस्रो हप्तामा गरिने भएकोले यी युवा प्रतिभाहरूले अन्तिम चरणमा छानिन बन्द प्रशिक्षणमा भने प्रभावशाली खेल देखाउनुपर्नेछ।
चोटका कारण अलराउन्डर सागर पुनलाई टोलीमा समेटिएको छैन । त्यस्तै टोलीमा नाम भए पनि बलिङ अलराउन्डर सोमपाल कामी पनि घाइते भएकाले उनी खेल्ने नखेल्ने निश्चित हुन बाँकी छ।
याे पनि पढ्नुस ऐतिहासिक जितका नायक स्वदेश फिर्ता !
हाल अष्ट्रेलियामा ‘बिग ब्यास’ नामक व्यावसायिक क्रिकेट खेलिरहेका सन्दीप लामिछाने उतैबाट यूएई जाने बताइएको छ। स्थापित खेलाडीहरू चोटग्रस्त भएको अवस्थामा युवा खेलाडीको राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाउने मौका बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रको मान्यता पाएको ६ महिनापछि नेपाली टोली पहिलो पटक यूएईसँग अन्तरदेशीय शृङ्खला खेल्न लागेको हो। जनवरी २५ देखि फेब्रुअरी तीन सम्म हुने शृङ्खलामा दुई देशले तीन वटा एकदिवसीय र तीन वटा २० ओभरको खेल खेल्ने तालिका छ।
नौ महिनाअगाडि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रको मान्यता पाएपछि नेपालले खेल्न लागेको यो दोस्रो एकदिवसीय खेल हो। यसअघि नेपालले गत अगस्टमा नेदरल्याण्ड्ससँग २ वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको थियो, जुन १-१ को बराबरी नतिजामा टुङ्गिएको थियो।
प्रारम्भिक टोलीमा पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, करण केसी, दिपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, प्रदिप ऐरी, आरिफ शेख, रोहित पौडेल, ललितसिंह भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, सुशन भारी, अविनाश बोहरा, भीम सार्की, विक्रम सोब, पवन सर्राफ, सन्दिप जोरा रहेका छन्। बीबीसीबाट